Dad boorsooyin lagu tahriibinaayay iyo dadkii arrinkaasi ka dambeeyay oo gacan lagu dhigay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dad boorsooyin lagu tahriibinaayay iyo dadkii arrinkaasi ka dambeeyay oo gacan lagu dhigay (SAWIRO)
Ciidanka booliska dalka Spain ayaa xabsiga dhigay labo qof oo la sheegay inay u dhasheen dalka Morooko, kadib markii lagu soo eedeeyay inay isku dayeen inay si sharci darro ah dad kusoo geliyaan dalkaasi.
Labadaan qof ayaa lasoo qabtay iyagoo si dhuumaaleysi ah raba inay dalka Spain kusoo geliyaan seddax qof oo labo ka mid ah ay ku qariyeen kuraasta gaariga hoostooda, halka midka seddaxaadne ay ku xireen boorso.
Booliska Spain ayaa sheegay in dadkaasi laga soo gudbiyay dhanka waqooyiga Afrika.
Ciidamo ka tirsan kuwa booliska Spain ayaa markii ay baareen gaariga ay dadkaasi wateen, si kedis ah uga helay qof lagu qariyay muraayadda hoosteeda, halka qofka kalena la geliyay kursiga dambe hoostiisa oo god laga dhigay.
Qof dumar ah iyo nin loo maleynaayo inay dalka Guinea kasoo jeedaan ayaa gar-gaar deg-deg ah loo sameeyay, maadaama uu neefsiga si aad ah u dhibaayay.
Dhacdadaan ayaa dhacday 30-ka bisha December ee sanadkii 2016-ka, waxaana wiilka boorsada lagu xiray la aaminsan yahay inuu kasoo jeedo dalka Gabon, kaas oo u baahday daaweyn deg-deg ah.
Gabar da’deeda lagu sheegay inay aheyd 22 jir, una dhalatay dalka Morooko ayaa isku dayday inay si qarsoodi ah wiilkaasi ku geliso Ceuta, balse laanta socdaalka ayaa ku amartay in haweeneydaasi ay furto boorsada oo xilligaasi ku xirneyd gaari-gacan.
Muhaajiriin Afrikaan ah ayaa xuduudda u dhaxeeysa Ceuta iyo Morooko isku deyay inay xoog uga gudbaan.
Ilaa 50 Morookaan ah iyo 5 askari oo Spanish ah ayaa dhaawacmay, ka dib markii 1,100 tahriibayaal ah ay maalintii Axada aheyd isku dayeen inay ka gudbaan xayndaabka halkaasi ku yaalay.
Inkastoo aysan suurta-galin in midkood uu ka gudbo halkaas, ayaa hadane labo qof oo ka mid ah dadkii tahriibayay ayaa dhaawacantay, waxaana dhaawacooda loo qaaday Isbitaal ku yaala Ceuta.
Mid ka mid ah askarta ilaalada aheyd ayaa sidoo kale ishiisa ku waayay intii ay rabshadu socotay, sida ay sheegayaan saraakiisha dalka Spain.
Dhinaca kale, dhacdo taas la mid ah ayaa 9-kii bisha December ee sanadkii hore ka dhacday xuduuda labadaasi dal kala qeybiya, kadib markii ilaa 400 tahriibayaal ah oo kasoo jeeda qaaradda Afrika ay isku dayeen inay si xoog ah ku gudbaan.